10 चीजहरू तपाईंलाई DMAA लिनु अघि जान्नुपर्छ | AASraw
/ब्लग/ग्यालरी/ 10 चीजहरू तपाईंलाई DMAA लिनु अघि जान्नुपर्छ
प्रकाशित 11 / 28 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
DMAA एक सिंथेटिक निर्माण गरिएको औषधि हो जसले शरीर निर्माण, शरीरको बोसोको जलाइदिन्छ र अल्टेमेट मेमोरी र रिफ्लेक्स कार्य सुधारको लागि मद्दत गर्छ। यस लेखमा DMAA खुराक फायदा र 1,3-dimethylamylamine को सम्भावित दुष्प्रभाव समावेश गर्दछ।
DMAA के हो?
बुझ्नका के is DMAA एक चीज हो कि कुनै पनि प्रदर्शन को वृद्धि एथलीट पूरक को उपयोग गर्न को लागी तल मा जोड दिए मा जोर दिए हुनु पर्छ। DMAA जो रासायनिक dimethylamylamine को लागि छोटो रूप हो एक ड्रग हो जुन पहिले प्राकृतिक जीनियमम तेल देखि एक निकाय को लागी मानिन्छ। यद्यपि, अनुसन्धानबाट, यसलाई स्थापित गरिएको छ 1,3dimethylamylamine प्रयोगशालामा प्रयोग गरिन्छ।
जसलाई पनि 1,3 DMAA भनिन्छ, जर्मन ड्रिग्रेटेड व्युत्पन्न ड्रगहरूसँग लागू औषधिको समान संरचना। यो कारण धेरै मानिसहरू सोचेका थिए कि DMAA पनि औषधीको एउटै कक्षामा थिए. DMAA पूर्व कसरत एक शब्द हो जुन पूरक प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको साथमा पर्याय छ किनकि यसले मुख्यतः ती व्यक्तिहरु द्वारा जो आफ्नो शरीर निर्माण र सत्र काट्न चाहन्छन् द्वारा प्रयोग गरिन्छ।
डीएमएए पाउडर मार्केट मा लाली एली लिली र कम्पनी द्वारा 1944 मा ल्याइयो। दबाइले औषधिमा धेरै प्रयोगको प्रयोगलाई नै नाक decongestant रूपमा फेला पारे। औषधि यस उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको थियो किनभने यो एपhedrine र pseudoephedrine को प्रयोग गर्न समान परिणामहरू प्रदान गर्न पाए।
पहिलोमा, धेरै व्यक्तिहरूले विश्वास गरे कि डीएमए गुलाब ग्यारियमम तेलबाट निकालेको थियो। त्यस कारणको लागि, यो उत्पादन गर्ने धेरै फर्महरू सामान्य छ DMAA पूरक गुलाब र गेनियमम प्लांटका भागहरु जस्तै जड र स्टेम को तस्वीरहरु लाई संकेत गर्दछ। यद्यपि, यस लामो विश्वासको बावजुद डीएमएएमा प्रयोगशाला परीक्षण अन्यथा देखाइएको छ।
यो साबित भएको छ कि DMAA ले प्रयोगशालामा सिथेटिक प्राप्त गरेको छ र यो प्राकृतिक रूपमा होइन किनकि यो लामो समयको लागि विश्वास गरिएको छ। बजारको पहिलो परिचय पछि, औषधि ठूलो मात्रामा बेचेको थियो किनभने एथलीटहरू यसको नतिजा प्रभावित भए। यो 1983 सम्म पूरै बजारबाट हटाइएको थियो जब।
फिर्ता दावी गरिएको थियो कि यो सार्वजनिक फार्मेसीहरूमा बिक्रीको लागि सुरक्षित थिएन। यो प्रतिबन्धले ब्ल्याक बजारमा बिक्रि भए तापनि दबाइको कमीको कारण थियो। DMAA पूरक को सार्वजनिक बिक्री 2006 मा शुरू भएको थियो जब यो एक नया नाम, Geranamine को व्यापार मा।
DMAA पूरै पूरै बेचेको थिएन। यसको सट्टा, यो वजन घटाने को पूरक मा शामिल गरियो र एथलेटिक प्रदर्शन सुधार औषधि को रूप मा वर्गीकृत गरियो। सार्वजनिक रसायनशास्त्रमा औषधीको पुनःआन्दोलनले एथलीट बढाउने प्रदर्शनमा यसको प्रयोगको सुरक्षाबारे थप विवादको लागि बुलाएको छ।
चिन्ता धेरै महत्वपूर्ण भएको छ कि खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) खतरनाक प्रभाव को बिना प्रयोग को लागी यसको उपयुक्तता प्रमाणित गर्न को लागी पूरक को निर्माताहरु लाई पूछना छ। क्यानाडा जस्ता देशहरूले यसको उद्देश्यबारे चिन्ता पनि उठाउनुभएको छ, र यसलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ।
यो 2010 को रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरूद्वारा प्रयोगको लागि सुरक्षित छैन, र विश्व एन्टि-डोपिंग एजेन्सीले भर्खरै यो हानिकारक पदार्थको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ जुन प्रयोगको लागि निषेधित गरिएको छ। त्यसकारण, एक खेलाडीले औषधि प्रयोग गर्न पाउने सम्भावनालाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरूमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव छ। विवादको परिणामको रूपमा यसको प्रयोगमा जोडिएको, डीएमएए पनि अमेरिकी सेनामा निषेध गरिएको छ।
पूरक भर्खरै सैन्य स्टोरबाट यसको प्रयोग नियन्त्रण गर्न फिर्ता लिइएको छ। न्यूजील्याण्डमा, लागू औषधि प्रयोग पनि अनुमति छैन। यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा अहिले पनि अवैध मानिन्छ।
DMAA के लागि प्रयोग गरिन्छ?
DMAA को वास्तविक कार्यविधि साबित भएको छैन। तथापि, दबाइले प्राकृतिक एड्रेनालिन को कार्य को नकल गर्न सोचेको छ। प्रयोगमा, डीएमएएले सीधा तंत्रिका तंत्रलाई असर गर्छ।
दबाइले कैफीनको प्रयोग संग पर्याय छ भन्ने उच्च उत्तेजना उत्पादन गर्न जान्दछ। तथापि, DMAA को कार्य को मोड कैफीन देखि भिन्न छ। जब लिइयो, डीएमएएले तनाव वा डरको अवधिमा सक्रिय हार्मोन हो भनेर नोरियनानेलिन उत्पादनको कारण बनाउँछ।
हार्मोन संक्रमणग्रस्त ग्रंथहरु मा सिंथेसाइज गरिएको छ जुन केवल गुर्दे को माथि मा पाइन्छ। रिलीजमा, हार्मोन रगतमा फैलिएको छ, र यसले हृदयको दरको वृद्धि बढाउँछ।
नेनेडेनानेलिनको उत्पादनले शरीर प्रणालीलाई ग्लूकोज रिलीजबाट ग्लूकोज जारी गर्न पनि संकेत गर्दछ। यो शरीर मांसपेशियों मा ऊर्जा को प्रवाह को बेहतर ले जान्छ, र यो सबै भन्दा एथलीट कसरत देखि पहिले इच्छा छ। DMAA को प्रयोग पनि सतर्कता, प्रेरणा र समयबद्ध प्रतिक्रिया जस्तै केहि पहलुहरु मा सुधार को लागि नेतृत्व गर्नेछन्।
यो मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो किन DMAA एथलीटहरू प्रयोग गरेर कसरत सत्र सुरु गर्नु अघि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। दबाइले उच्च ऊर्जाको भावनालाई उद्धार गर्दछ जुन एथलीटले अतिरिक्त ऊर्जा उपभोग गर्ने गतिविधिमा संलग्न हुन चाहन्छ। DMAA को प्रयोगले ऊर्जाको औसत भावनाबाट एथलीटहरू सुरक्षित गरेको छ जुन सामान्यतया प्रयोग गरिएको क्याफिनको कार्यसँग आउँछ।
DMAA कैफीन को सुधार हो, र जो यो लामो समय सम्म प्रयोग को लागी लत को विकास शुरू गर्न सक्छन्। यसको मतलब नियन्त्रित प्रयोग आवश्यक छ। जब प्रयोग गरिन्छ, यो ठूलो मस्तिष्क को बढावा को भावना को उत्थान दिमाग को साबित गर्दछ।
रक्तचापको उच्च वृद्धि यो सँगसँगै। यस मोडको नतिजाको परिणामस्वरूप, धेरै व्यक्तिहरूले लागूपदार्थको दुरुपयोग गर्छन्। तथापि, केहि खेलाडीहरूले शरीरमा रचनात्मक इरादा संग औषधि प्रयोग गर्छन्। निम्नलिखित DMAA को सकारात्मक उपयोग को केहि हो:
1। वसाको जलाशय
सामान्यतया, शरीर स्वाभाविक रूपमा अतिरिक्त वसा जलाइन्छ। यद्यपि, यो सुस्त योग्यता भन्दा कम गतिमा हुन सक्छ। प्रक्रियालाई छिटो पार्न एथलीटहरू प्रदर्शन गर्नका लागी पूरक पूरक प्रयोग को लागी। प्रायः यी केही खुराकहरू जस्तै स्टेरिरोइडहरू छन् Nootropics.
यस्तो पूरक प्रयोग को पर्याप्त जल को दर मा सुधार गर्दछ। DMAA अतिरिक्त वसा को जलने मा अन्य ज्ञात पूरक को रूप मा प्रभावी छ। धेरै कसरत सत्रहरु धेरै परिणाम प्राप्त गर्न को लागि डिज़ाइन गरिएको छ, मुख्य को मुख्य शरीर को बोसो को कमी को रूप मा जो शरीर को एक अपरिवर्तित अपील को कमी को रूप मा कमी छ।
बढि वसाले पनि एथलीटको भलाइमा खतरा बढाउँछ किनभने यस्तो अवस्थामा रक्त रेजहरु को रोकावट बढ्न सक्छ। जब यो हुन्छ, रक्त मा ओक्सीजन को न्यूनतम प्रवाह हुनेछ र व्यक्तिगत को सामान्य गतिविधि अत्यधिक प्रभावित हुनेछ। अब यस्तो अवस्थामा जोगाउन कुञ्जी DMAA जस्ता औषधी प्रयोगको माध्यमबाट हो जुन तपाइँको शरीरले उच्च स्तरको ऊर्जा प्रदान गर्दछ।
एक पटक ऊर्जावान भएपछि, प्रयोगकर्ताले गतिविधिमा संलग्न हुन गाह्रो हुन्छ जुन ऊर्जा उपभोग गर्दछ, र फलस्वरूप, हानिकारक र अनावश्यक शरीर बोसो कम हुन्छ। शरीरको बोसोको ज्वारमा दबाइ निकै प्रभावकारी हुन्छ। , र यो एथलीटहरु को लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो विशेष रूप देखि अफसोस को काटने को समयमा प्राप्त गर्न चाहते हो। औषधिको प्रभावकारिता लगभग असीमित छ।
क्याफिन जस्तै उत्तेजना संग युगल हुँदा DMAA लाई शरीरको चयापचय गतिविधिको बारेमा 35% सुधारिएको पाइन्छ। यो, बारी मा, ठूलो उल्लेखनीय मार्जिन द्वारा वसा जलने को दर सुधार गर्न मा मदद गर्दछ। लागूपदार्थले यो ट्रिगर गर्दछ भन्ने औषधिले काम गर्दछ मोटो जलिरहेको पहिले शरीर को लागि संकेत संकेत गर्नु स्वाभाविक रूप देखि हुन्छ।
जस्तै DMAA को क्रिया सीधा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखि जुडे हो, ड्रग ले सुनिश्चित गर्दछ कि यसले यो कार्रवाई को तीव्र गति मा ट्रिगर गर्दछ। उत्तेजना मा, सीएनएस ले प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न को प्रतिक्रिया गर्दछ जो वसा जलने को सक्षम गर्दछ। त्यसकारण, यो बजारमा अन्य शीर्ष वोसो जलविद्युत आपूर्तिको साथ DMAA कार्यको तुलना गर्न उचित हुन सक्दछ।
2। शरीर भवन
कसरत गर्नु भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ऊर्जा हो। यही कारणले तपाइँलाई हेर्न को लागी तपाईलाई अगाडि बढ्नको लागी ऊर्जा को यी गुणहरु लाई सम्भव छ। Mesomorph पूर्व कसरत dmaa
एक बिल्डर बिल्डर दिने कुराको प्रकार हो जुन उचित हेड सुरु हुन्छ जुन तपाईले आफ्नो कसरत सफल गर्न आवश्यक छ।
अघिल्लो पटक क्याप्शन गरिएको छ, औषधि छद्मपैडिनरीको जस्तै प्रभाव प्रदान गर्न जान्दछ। यो ड्रगले प्रयोगकर्तालाई 'उच्च' मोडमा ल्याउनेछ। यसले एक ठूलो ऊर्जा रिजर्भको साथ प्रदान गर्दछ जुन भारोत्तोलनको लागि आवश्यक छ।
उत्तम परिणामहरूको लागि, उच्च ऊर्जा प्रदान गर्ने औषधि कसरत सत्र अघि राख्नु पर्छ। यसले प्रयोगकर्तालाई ऊर्जाको बआउटहरूको साथमा टाढा पार्नेछ, जुन उनीहरूले सबै प्रदर्शन एथलीटहरूलाई उच्च नोटमा सुरू गर्न आवश्यक हुन्छ। यस्तो औषधीले शरीरको प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रियाहरु लाई प्रभावित गर्दछ।
सेवनमा, दबाइले वाष्टाचारलाई बढाउँछ। यो एक प्रक्रिया हो जुन सामान्यतया हुन्छ जब वातावरणमा अत्यधिक ताप हुन्छ। शरीर रेजहरूको आकार बढेर प्रतिक्रिया गर्दछ। यो छालाको सतहमा रगतको लागी थप रगत ल्याउनुको अर्थ हो।
धेरै प्रदर्शन-बढ्दो औषधहरू समावेश छन् नाइट्रिक अक्साइड जसले रक्त वाहिकाहरू विस्तारलाई प्रेरित प्रेरित वासिनोलेसनद्वारा बढाउँछ। यो एथलीटका लागि एक थप फायदा हो, विशेष गरी एक समयमा पूर्व कसरत। एकपटक ठूलो, बढी रगत लिनको लागि सतहको क्षेत्र धेरै बढेको छ।
यसले एथलीटलाई रक्तको आंदोलनको लागि भत्ता प्रदान गर्नेछ जुन औषधिको उपभोग गर्नु भन्दा पहिले नै अस्तित्वमा थिएन। त्यसपछि, तीव्र प्रशिक्षण सम्भव छ, र एथलीटले मांसपेशी विकास को बढावा दिन ऊर्जा को भार छ।
यद्यपि, यस सन्दर्भमा DMAA को प्रयोग यसको विपरीत हुन पाईन्छ जुन धेरै व्यक्तिहरूले प्रदर्शन-वृद्धि औषधि सम्बन्धी आशा गर्थे। धेरै नाइट्रिक अक्साइड ड्रग्स जस्तै vasodilation को बढावा को बजाय, DMAA विपरीत गर्छ। यसले vasoconstriction को कारण बनता छ जो अवधि को समयमा सामान्य हुन्छ जब वातावरण मा तापमान कम हुन्छ।
यस्तो समयमा, शरीर आफ्नो तापमान को बनाए राख्न को लागि संघर्ष गर्छ, र यो छाला को सतह देखि रक्त को फिर्ता ले भएको छ। यो, तथापि, जब खुसी अधिक उच्च छ र DMAA लिन योजना बनाउने को लागि एक चिन्ता हुँदैन।
3। छोटो अवधि मेमोरी र रिफ्लेक्स कार्य सुधार गर्न मद्दत गर्दछ
सबैलाई उनीहरूलाई आवश्यक सबै कुरा सम्झन मन पर्छ। तथापि, यो प्रायः सामान्यतया मामला होइन जुन मानिसहरूको जीवनले धेरै घटनाहरूबाट सामना गरेको छ जुन यो कठिन हुन सक्छ। DMAA यस अगाडि सहायक सहायक हुन सक्छ।
यस पूरक को प्रयोगकर्ताहरु द्वारा किए गए अध्ययनहरु ले प्रकट गरेको छ कि यिनीहरुमा शामिल हुनु भन्दा पहिले बेहतर अल्पावधि स्मृति थियो। त्यसो भए, यद्यपि धेरै मानिसहरूले यो प्राप्त गर्नका लागि औषधि लिने छैनन्, यो यसको उपभोगको एड-अन प्रभावको रूपमा आउनेछ। र यो प्राथमिक फायदा मध्ये एक हो कि धेरै मान्छे DMAA को उपयोग गरेर पनि तपाईं आफ्नो योजना को बिना हुन्छ।
उच्च रिफ्लेक्स एक्शन पनि एक विशेषता हो कि धेरै एथलीट अनुभव गर्न चाहान्छ। DMAA को प्रयोगले शरीरलाई अत्यधिक सजग गराउँछ, र यसले प्रदर्शन चापलाई सुधार गर्दछ। यसको अर्थ छ कि DMAA प्रयोगकर्ताहरू विशेष गरी बडिबिल्डिङ गर्ने वा प्रतियोगिताहरूमा। दबाइ शरीर को चयापचय को दर को सुधार गरेर संचालित हुन्छ।
यसपछि यो शरीर प्रक्रियाहरू सामान्य भन्दा छिटो दरमा घट्न सक्छ। यो भौतिक रूप देखि एक व्यक्ति को हो जो धेरै सक्रिय र अलर्ट हो द्वारा दृश्यित छ। तथापि, यस विशेष मोर्चामा मात्र ब्लुटुथ भनेको प्रतिस्पर्धामा लागू औषधिको प्रयोग निषेधित छ।
यसैले, एथलेटिक्स को समयमा रिफ्लेक्स क्रिया को सुधार को लागि यसको उपयोग को अनुमति छैन। तथापि अझै पनि गतिशीलता र गतिको सुधार प्राप्त गर्न अफिसले एथलीटहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
DMAA पूरकहरू सुरक्षित छन्?
यो प्रतियोगी खेलहरूमा भाग लिने सबैको लागि चिन्ता हुनुपर्छ। ड्रग संसारको डोपिंग संगठन द्वारा प्रयोगको लागि असुरक्षित ड्रग्समा सूचीबद्ध गरिएको छ। धेरै अन्य निकायहरूमा विशेष दायित्वमा DMAA को प्रयोग प्रतिबन्धित छ। यद्यपि, यो एक विषय हो जुन विस्तृत विविध विचारहरू सिर्जना गरेको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका को खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) एजेन्सी को मान्य उपभोग को लागि DMAA को लागी असुरक्षित मानिन्छ। एजेन्सीले तर्क गर्दछ कि DMAA को कार्य सम्बन्धी कुनै जानकारी छैन जुन प्रयोगको लागि सुरक्षित औषधि बन्न सक्छ। एजेन्सीको वेबसाइटमा, शरीरले उनीहरूलाई स्वास्थ्य खतराहरूको खतरामा पुग्न सक्षम रूपमा सबै खर्चमा लागू औषध प्रयोग गर्नबाट सल्लाह दिन्छ।
एफडीए को प्राथमिक चिन्ता मध्ये एक vasoconstriction को कारण औषधि को क्षमता हो। यो उनीहरू उच्च रक्तचापको पूर्ववर्ती हो कि अन्ततः मृत्युको नेतृत्व गर्न सक्दछन् यदि पर्याप्त चाँडै निलम्बित छैन। अन्य श्वसन पथ प्रभावहरु जुन डीएमएए को उपयोग संग अनुभव को संभावना हो, साँस लेने मा मांसपेशिहरु, दिल को दौरा र हिसाब को एक उच्च संभावना मा शामिल हो।
एफडीए अनुसार, औषधिको प्रयोग पनि न्यूरोलॉजिकल विकारहरूको कारणले गर्दा यो मुख्य रूपमा केन्द्रित तंत्रिका तवरमा प्रभाव पार्ने काम गर्दछ। यो खतरनाक हुन सक्छ किनकि यसले पक्षाघात र अन्य घातक जटिलताको परिणाम पनि हुन सक्छ।
एफडीए यति धेरै लचीला भएको छ कि DMAA युक्त पूरकहरू पूरै बजारबाट हटाइएका छन्। उनीहरूले विभिन्न कदमहरू बीचको कुञ्जीमा औषधीवालाहरूलाई जारी पत्रहरू जारी गर्दै जो डीएमएएमा पूरक औषधिहरू बिक्री गर्नबाट उनीहरूलाई युद्ध गर्न सक्छन्। यदि तिनीहरू अलमारियों मा यस्तो पूरक भेट्न भने, एजेन्सीहरूले विक्रयहरूलाई सोध्छन् र निर्माताहरूबाट अर्को अर्डर बनाउनबाट बचाउन सोध्छन्।
अहिले सम्म, धेरै फर्महरू अनुपालन गरिएको छ। यो अभियान 2012 मा सुरू भयो, र यसले पूर्ण प्रभाव पारेको छ किनकी त्यहाँ DMAA खुराकहरूको हाल धेरै कम बिक्री हो। त्यहाँ पनि त्यस्ता मुद्दाहरू छन् जसमा केही फर्महरूले एफडीएलाई रोक्न पनि पछि डीएमएए उत्पादन गर्न जारी राख्छन्।
यस्तो मामलाहरु 2013 मा देखा पर्यो जब यूएसएलब्स भनिन्छ कि फर्मले पूरक निर्माण गर्न रोक्न अस्वीकार गर्यो। एफडीएले उनीहरूको अपरेशन रोक्यो, र प्रश्नमा फर्मले उत्पादनमा पहिले नै बजार नष्ट गरेको थियो। उनीहरूको अनुमानित खुदरा मूल्य लगभग $ 8 मिलियन थियो।
यो थाहा छ कि कतिपय एजेन्सीले DMAA पूरक उत्पादनको उत्पादनलाई रोक्न तयार छ र कसरी एक नै औषधि देशको नागरिकको लागि यसको बाटो पत्ता लगाउन तयार छ। एफडीए एक कदम अगाडी गएको छ र विभिन्न नामहरू सूचीबद्ध गरिएको छ जसले निर्माताहरूले उपभोक्ताओंलाई रोक्नका लागि प्रयोग गर्न सक्दछन् कि तिनीहरू DMAA खरिद गरिरहेका छन्। यो एजेन्सी पछि एहसास भयो कि धेरै कम्पनीले प्रतिबन्धित नामहरुमा ड्रग उत्पादन गरीरहेको छ जसले उपभोक्ताओंलाई प्रतिबन्धित औषधि को सीधा पहिचान गर्न रोक्न सक्छ।
केहि ब्ल्याक्लिस्ट नामहरुमा गेराणामीन र मेथाइलहेम्यामीन शामिल छ। अन्य कम्पनीले संकेत गर्दछ कि पूरकमा गेनियम संयंत्र निकासी हुन्छ। यो DMAA को उपस्थिति को सूचक हो। एफडीएले उपभोक्तालाई कुनै पनि पूरकबाट जोगिनमा जेरिनमबाट निकासी समावेश गर्दछ।
प्रतिबन्धहरू क्यानाडा र न्यूजील्याण्ड र अन्य देशहरूमा अन्य देशहरूमा समान छन्। मुख्य चिन्ताको भर पर्दा श्वसन प्रणालीमा यसको प्रभाव हो। विश्वको विरोधी डपिंग एजेन्सीले पनि सूचीबद्ध गरेको छ डीएमएए पाउडर ड्रग्सहरू जुन मानव प्रयोगका लागि असुरक्षित छन्। यसको अर्थ यो विश्वकप जस्तै प्रतिस्पर्धाहरूमा संलग्न खेलाडीहरूले प्रयोगको लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
यो तथापि अनुमति दिइएको केही प्रतियोगिहरूमा विशेषतया कम खुराकहरूमा अनुमति दिइएको स्तर भित्र। तथापि, यो सँधै समस्याको लक्षणबाट बच्नको लागी औषधि लिन अघि भाग लिन प्रतियोगिताको प्रतिबन्ध बारे निश्चित हुन सधैं राम्रो छ।
DMAA सुरक्षित छ कि एफडीए र अन्य कम्पनीहरूको बीचमा विभिन्न कानुनीहरू पछि अर्को मोडा भयो विषय। कम्पनीहरूले अझै कडा आग्रह गरे कि माक्रकोटिक पूरक बिक्रीको सम्बन्धमा कुनै हानि छैन। एक अनुसन्धानले उत्पन्न गरेको थियो कि डीएमए साँच्चै ज्यारियम प्लानको उत्पादन थियो र यो एफडीएको विरोध थियो।
तथापि, एजेन्सीले कुनै पनि सहयोगी प्रमाणलाई आफ्नो दावी फिर्ता गर्न सकेन कि ड्रग कृत्रिम रूपमा प्राप्त भएको थियो। एक डाक्टर को अनुसार पूरक को उपयोग गर्न को लागी असामान्य दावी को जांच को, कुनै स्वस्थ प्रभाव को एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को रूप मा अपेक्षित गरिनेछ जो पूरक पूरक को उपयोग गरे। डाक्टरले तर्क दिए कि पूर्व कार्यरत पूरकहरूमा फेला पारेका DMAA को मात्रा मानव प्रयोगको लागि विषैले मानिएको जस्तो थियो।
अर्को अनुसन्धानमा, दाइजोहरूको समयमा उत्तेजक रूपमा DMAA प्रयोग गरी जवानहरू एक सामान्य बीमारी, मस्तिष्क स्ट्रोक विकसित गर्न पाए। यसले थप उपचारमा DMAA प्रयोग गर्ने सुरक्षाको बारेमा एफडीएको दावीलाई बलियो बनायो। तथापि, अर्को अनुसन्धानले एफडीएको सहयोगको प्रमाण टुक्रालाई टुक्रा बनायो भने पछि फेला पर्यो कि प्रश्नका युवाहरूले औषधिको एक अत्यन्त उच्च खुराक प्रयोग गरेका थिए।
यो खुलासा गरिएको थियो कि तिनीहरूले गोल गरे कि हरेक सक्रिय सक्रिय पदार्थ को 600mg मा निहित थियो। यो सामान्य परिदृश्यको रूपमा अपेक्षाकृत उच्च थियो, र अधिक अपेक्षित राशि 60mg को एक पूरक गोली मा छ। यसको अर्थ यी जवानहरूले उनीहरूलाई दस चोटि के सोचेका थिए।
संक्षेपमा, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट, औषधीलाई सुरक्षित पूर्व-कसरत औषधिको रुपमा मान्न सकिन्छ कि औषधिको उपयुक्त खुराक लिन सकिन्छ। यदि DMAA ले 75mg भन्दा माथिको खुराकहरूमा लिइन्छ भने, रक्तचापको उचाइको संभावना अनावश्यक स्तरमा हुन्छ, र यसरी विचार गर्नु पर्छ। औषधि मात्र व्यक्तिका व्यक्तिहरु द्वारा प्रयोग हुनु पर्छ जुन अतीत मा उच्च रक्तचाप को कुनै इतिहास छैन किनभने यसको प्रयोग स्थिति बदतर सक्छ।
साथै, एफडीए धेरै कम्पनीहरु जसले ड्रग उत्पादन गर्दै छन् भन्ने अस्वीकार गरिएको छ भने, उनीसँग DMAA प्रयोगको सुरक्षाको बारेमा एक बिन्दु छ। यसैले यो तिनीहरूको चिन्तालाई बदनाम गर्न र कालो बजारबाट पूरै खरिद गर्न जारी राख्न योग्य छैन। DMAA पूर्व-कसरत पाउडरको प्रयोग गर्नु पहिले चिकित्सकको साथ परामर्श आवश्यक छ।
यसले सुनिश्चित गर्नेछ कि प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा ब्लीच बिना अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन्छ।
DMAA पूरक लिनु अघि तपाईलाई के थाहा छ?
त्यहाँ धेरै तथ्याङ्कहरू छन् कि कुनै पनि प्रदर्शन बढाउने एथलीटले डीएमएएमा रोजगारी गर्नुअघि रोजगारीको पूर्व कसरत औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ। यी मध्ये केहि केहि साइड इफेक्टहरू समावेश गर्दछ जुन एकको सामना गर्न सम्भव छ साथै तपाईं यसको प्रयोगबाट कटौती हुने फाइदाहरू।
प्राथमिक कुराहरू जो तपाइँ जान्नु आवश्यक छ यो औषधि प्रयोगका प्रभावहरु लाई कोकेन र मेथिम्पेटामिन प्रयोग को लागी अनुभवी हुन सक्छ जस्तै छ। यसको मतलब यो एक लत विकास को सम्भावना धेरै उच्च छ किनकी यो सबै भन्दा शक्तिशाली ज्ञात उत्तेजनाहरु को बीच मा शीर्ष हुन्छ। तपाईं जागिर हुनु पर्छ कि तपाई आफ्नो शरीरलाई बलियो लतको एक खुल्ला हुन सक्छ जब तपाईं आफ्नो कसरत सुधार गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ।
लतको मौकाबाट बच्नको लागि, तपाइँले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईले तपाइँको स्वास्थ्यको लागी तपाइँको चिकित्सकलाई विश्वासयोग्य राख्ने कथित तरिकाले पछ्याउनुहोस्। यो बुझ्न पनि आवश्यक छ कि दबाइ को प्रयोग सीधा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित गर्न को लागी जाँदैछ। DMAA सीएनएसको स्वागत दर को कम गरेर आफ्नो क्याफिन को अत्यधिक अलर्ट बनाएर कैफीन को समान काम गर्दछ।
दबाइ कैफीन भन्दा बलियो छ र तपाईंको शरीरलाई ऊर्जा जगेडा दिनेछ जुन तपाईले उच्च नोटमा आफ्नो कसरत सत्र सुरु गर्न आवश्यक छ। यसकारण यो फेरि फेरि महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले खुवाउने औषधिको रूपमा सिधा रूपमा सबै भन्दा संवेदनशीलता शरीरका भागहरूलाई सीधा असर गर्दछ। 2012 मा रिपोर्ट गरिएको एक मामला मा, युवा सत्र को एक समूह को पार्टी सत्र को समयमा ड्रग को उपयोग गर्न को लागि सहारा।
तिनीहरूले एक-पटक खुट्टाको लागि आवश्यक के भन्दा दस गुना बढी खपत गर्यो। इरादा थियो 'उच्च' छिटो प्राप्त गर्न, र यो तिनीहरूको पूर्वनिर्धारित हुन सकियो। दबाइले आफ्नो केन्द्रीय तंत्रिका तंत्रलाई प्रभावित गर्यो, र अधिकतर एक सर्बिल स्ट्रोक जो टर्मिनल रोग हुन्छ।
प्रयोगकर्ताहरूले पनि नाइट्रिक अक्साइड समावेश गर्ने धेरै पूर्व कार्यरत पूरकहरूको विपरीतको बारेमा बुझ्नैपर्छ, DMAA रेजहरूको vasoconstriction को कारण बनाउँछ। यसको मतलब यो हो कि व्यक्तिले DMAA गोलहरू लिने व्यक्तिले रगतको भाँडाहरू मार्न सक्दछ जुन भन्दा बढी छैन। यो स्थिति घातक हुन सक्छ यदि यो उच्च रक्तचापको समस्या भएको छ भने यो बीमारी को गम्भीरता बढाउन सम्भव छ जस्तो देखिन्छ।
यसैले, एक उच्च रक्तचाप देखि पीडित व्यक्ति DMAA को उपयोग गर्न देखि बचना चाहिए।
लागूपदार्थको प्रयोगले रक्त प्रवाह वृद्धि र उच्च ऊर्जाको महसुस गर्न सम्भव छ। अन्य प्रदर्शन बढ्दो ड्रग्सको साथ पूरक युग्मनलाई खतरनाक हुन सक्छ किनभने यसले तपाईंको शरीरलाई ठूलो ऊर्जा प्रदान गर्न सक्छ जुन तपाइँ सम्भवतः सम्भव नहुन सक्छ। यो बुझ्न योग्य छ कि DMAA मुख्य रूपमा पूर्व-कसरत पूरक हो जुन कुनै पनि अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग हुनु हुँदैन।
केही मानिसहरू अतीतमा यो सेक्स वृद्धि ड्रगको रूपमा प्रयोग गर्थे, तर यो धेरै गलत छ। यो दुर्व्यवहार गरेमा कोमामा गुजरने को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ र यो सधैँ प्रयोगको समयमा विचार गर्नुपर्दछ।
DMAA पूर्व कसरत र पूर्व कसरत साइड इफेक्ट
DMAA को खपत पछि, केहि मान्छेले पूर्व कसरत साइड इफेक्ट्स को कारण विलक्षण र उल्टी सहित अनुभव गरेको छ। यो सामान्य हो, र यसको अर्थ भनेको तपाइँको शरीरले सम्भवतः लागूपदार्थलाई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ। यद्यपि, उल्टी र विच्छेद जरूरी DMAA प्रयोगले प्रत्यक्ष रूपमा प्रत्यक्ष नहुन सक्छ। रासायनिक पूरक औषधिहरु मा अन्य घटकहरु मा निहित छ, र उनि पनि उल्टी को कारण हुन सक्छन्।
यसबाहेक, अन्य पूर्व-कसरत प्रभावहरू DMAA जस्ता उत्तेजनाहरूको प्रयोगको साथ सामान्य हो। यस्तो समावेश छ:
अवरोधित नींद ढाँचा
धेरै पूरकहरू प्रयोग गर्ने उद्धार गरिएका मानिसहरूका वर्गीकरणहरूसँग आउँछन्, र तिनीहरूका बीचमा लचकदार आमाहरू र गर्भवती हुनेहरू पनि समावेश छन्। यस कारणको कारण यो कारणले, गर्भवती महिलाहरु को मामला मा, लागूपदार्थ को प्रयोग अत्यधिक गर्भधारण बच्चाहरु को विकास को प्रभावित गर्न को संभावना हो। तथापि, मानिसहरूका वर्गीकृत समूहहरूमा धेरै पूरक प्रयोगको बारेमा धेरै जानकारी उपलब्ध भए तापनि, यो DMAA पूर्व-कार्यरत ड्रगहरूसँग सम्बन्धित मामला छैन।
यस सम्बन्धमा धेरै थोरै जानकारीहरू छन्। यसैले, जसले पूर्व-कसरत ड्रगको रूपमा DMAA प्रयोग गर्न मनपर्छ र गर्भवती वा ल्यापटप हो भने त्यसबाट टाढै पर्छ किनकि अपेक्षित दुष्प्रभावको बारेमा धेरै कम जानकारी छ। यो प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्वनिर्धारित प्रभावहरूको तुलना गर्नुको सट्टा सुरक्षित दृष्टिकोण हुनेछ जुन तिनीहरूले कहिल्यै सोचेनन्।
DMAA औषधि एक उत्तेजना को रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ। यसको मतलब यो प्रतिकूल रूपमा सुरक्षित शल्यक्रियाको सम्भावनाको सम्भावना सम्भावना छ जुन विशेष रूपमा यो सञ्चालन भन्दा पहिले नै लिइएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा जोगिनको लागि, यदि तपाई शल्यक्रियाका लागि सेट गरिएको छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्नबाट रोक्न योग्य छ।
शल्यक्रिया गर्नु अघि कुनै उत्तेजक लिन बाट बृद्धि गर्न यो सल्लाह छ। यो उच्च रक्तचाप देखि बचाउन को लागी छ कि सर्जरी को समयमा घातक हुन सक्छ।
यो सबैभन्दा स्पष्ट पक्ष प्रभाव हो जुन DMAA प्रयोग गर्ने व्यक्तिसँग पर्याय छ। यो किनभने यो औषधि एक उत्तेजना हो र यस वर्गको धेरै भन्दा धेरै ड्रगहरू उच्च रक्तचापलाई विशेष गरी जब दुर्व्यवहार उत्पन्न गर्न जान्दछन्। DMAA रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण गर्न को लागी जान्छ, र यसले रक्त को कारण सामान्य देखि तेज गति मा प्रवाह गर्न को कारण बनता हो उच्च रक्तचाप।
यस पक्ष प्रभावको कारण, DMAA को प्रयोग अन्य प्रतिकूल रोगहरू जस्तै अनाज स्ट्रोकको कारण फेला पर्यो। यो लक्षणको अवस्थामा, प्रयोगकर्ताले द्रुत रूपमा औषधि प्रयोग गर्नबाट रोक्न पर्छ। यो किनभने यसको निरन्तर उपयोगले लक्षणहरू बढाउन सम्भव छ र मृत्युको निम्ति पनि नेतृत्व गर्न सक्छ।
तथापि, नियन्त्रित खपत मार्फत उच्च रक्तचाप रोक्न सम्भव छ। यसले सर्वोत्तम नतिजा दिनेछ यदि यसलाई औषधिद्वारा सुविधा दिइएको छ जसले उपयुक्त खुराक के निर्धारण गर्न परीक्षा लिनेछ।
तपाईंको प्रणालीमा DMAA कति लामो छ?
DMAA को प्रशासन को सबै भन्दा सामान्य मार्ग मौखिक छ। जब यो तरिका लिन्छ, उपभोक्ताको रक्तचापमा लाग्न लाग्दा औषधिको लागी आठ मिनेट लाग्छ। तथापि, असरहरू तुरुन्तै महसुस हुने छैनन् किनकि प्रायजसो ड्रगहरूले आधे-जीवन अवधिलाई के भनिन्छ। यो समय हो कि लागू औषधको लागि आवश्यक छ र यसको सक्रिय अवयवलाई शरीरको प्रयोगको लागि रिहा गर्न आवश्यक छ।
DMAA को आधा-जीवन 8 घन्टाको बारेमा हो। यसैले, एक कसरत सत्र अघि आफ्नो शरीर को बढावा गर्न को लागी एक व्यक्ति को लागू औषधि को लागि पर्याप्त समय देउन्जेल 8 घडीहरु लाई शरीर मा अवशोषित गर्न को लागी लेना चाहिए।
लागूपदार्थको प्रयोग पछि, उच्च हुने सामान्य भावना अनुभवी हुन्छ। सामान्यतया, यो महसुस गर्दैन कि अधिकांश मानिसहरू सबै समयका अनुभवहरू अनुभव गर्न चाहन्छन् जब विशेष गरी तिनीहरू काम गर्दैनन्। यसकारण, उपभोग पछि शरीरबाट निकासी गर्न औषधि द्वारा कुन समय थाहा पाउन आवश्यक छ।
औसतमा, दबाइको शरीरमा 24-घन्टाको दिनको लागि औषधि राखिएको छ पछि जुन भावनाहरू अब अनुभव गरिएको छैन।
फैट बर्नको लागि DMAA को लाभ
सम्भवतः, तपाईंले वजन घटानेमा DMAA क्षमताको बारेमा धेरै मिथकहरू र तथ्याङ्कहरू सुन्नुभएको छ र तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि तिनीहरू मध्ये कुन कुरा बुझ्दछन्। ठीक छ, यस तथ्य को तथ्य यो हो कि DMAA पूरक तपाईं विभिन्न तरिका मा वजन को एक महत्वपूर्ण राशि बहाने मा मदद गर्न सक्छन्।
पहिलो, एक Dimethylamylamine पूरकले तपाईलाई फोकस र उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्न सक्दछन् तपाईंको दुखाइ र ऊर्जाको सहनशीलता बढाउन। बढेको ऊर्जा र दुखाइ सहनशीलताले तपाईलाई सफलतापूर्वक कडा वजन घटानेको प्रशिक्षण चलाउन मद्दत गर्नेछ।
जब यो शरीरको बोसोको जलाउन आउदछ, 13Dimethylamylamine एक प्रमुख थर्मोगेनिक मोट बर्नर मध्ये एक हो। धेरै सम्मानित मोटा जलाउने पूरकहरू जस्तै, DMAA सामान्यतया सामान्यतया भन्दा छिटो जलाउने ज्वलन बढाउँछ, जसमा वसाको जलाशय धेरै सम्भव छैन।
तपाईं सोच छन् डोमाले के गर्छ तपाईंको शरीरमा बोसो जलाइयो?
ठीक छ, DMAA ले तपाईंको ऊर्जा को vasoconstriction को माध्यम ले बढावा गर्दछ, एक प्रक्रिया जसमा तपाईंको रक्त को प्रवाह को प्रतिबंध शामिल छ। प्रतिबन्धित रक्त प्रवाह मांसपेशी वृद्धि साथै मांसपेशी उत्तेजना को कारण हुन्छ। जस्तै कि, तपाईंको चयापचय दर बढ्छ, शरीर को बोसो को तेजी देखि र अधिक कुशल को लागि अग्रणी।
DMAA, एपिडेरिन र एम्फेटामाइन को संरचना धेरै समानताहरु साझा गर्दछ। जस्तै, DMAA मानवको केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रोत्साहित गर्न सक्छ, जसले दिमाग को नोरपाइनफाइन को रिलीज गर्न सक्छ। साथै, यसले शरीरको अल्फा र बेटा रिसेप्टरहरूलाई नडाडेनरलिन गतिविधि बढाएको छ, फलस्वरूप, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रणाली अप्रत्यक्ष रूपमा उत्तेजित गर्दछ।
दुवै कार्यहरु को एक संयोजन शरीर को चयापचय दर को वृद्धि को रूप मा राम्रो तरिकाले को रूप मा ऊर्जा को उत्पादन को लागि ऊतक ऊतक देखि वसा ब्रेकडाउन - यो प्रक्रिया लाई लिपोलिस भनिन्छ।
DMAA को प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ यदि यो कैफीन जस्तै अन्य उत्तेजक तत्वहरु संग एकसाथ प्रयोग गरिन्छ।
यदि क्याफिनसँग एकसाथ प्रयोग गरिन्छ, 35% द्वारा चयापचय दर वृद्धिमा DMAA को असर हुँदा वसा जलने दक्षता 169% भन्दा बढि बढ्छ।
हालैको अध्ययनमा वसाको जलाशयमा DMAA को प्रभाव पार्न को लागी DMAA प्रभावशीलता को जांच को लागी, एक्सएनएनएक्सएक्स स्वस्थ वयस्कों जसले 32 दिन को लागि एक पूरक को एक कैप्सूल को एक महत्वपूर्ण वसा हानि को अनुभव गरे।
DMAA को साइड इफेक्ट
कुनै अन्य औषधि जस्तै, DMAA हुन सक्छ यदि दुर्व्यवहार केहि साइड इफेक्ट हुन सक्छ। यहाँ सम्भव छ DMAA दुष्प्रभाव:
1. अनाबिक हार्मोरहेज
यद्यपि DMAA लाई सीनेब्रल हार्मोरेशन लाई सीधा लिंक गर्न कुनै प्रमाण छैन, त्यहाँ एक व्यक्ति को रिपोर्ट गरिएको मामला हो जो शक्तिशाली र DMAA मिश्रण पछि हालत विकसित भयो। यद्यपि, ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण छ कि DMAA को शराब संग एक साथ प्रयोग नहीं हुनु पर्छ अन्यथा त्यहि साइड प्रभाव प्रबल हुन सक्छ।
2. लिभर चोट
लिभरको मुख्य प्रकार्य यो पाचन पथको रगतलाई फिल्टर गर्नु भनेको यसलाई शरीरको अन्य भागहरूमा पुग्न अनुमति दिनु हो। यसबाहेक, जिगरले लागूपदार्थहरू metabolizes र रसायनहरूलाई पनि अस्वीकार गर्दछ।
जब तपाईं DMAA गोली वा पूरक लिनुहुन्छ भने, लिभरले लागू औषधि / पूरकको घटकसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। नतिजाको रूपमा लिगरले एन्जाइम निर्माणको अनुभव गर्न सक्छ जुन जहरीले हुन सक्छ। दबाइले पनि जिगर सूजनको कारण हुनसक्छ जुन समयको परिणाम संग स्थायी जिगर क्षति वा धुवाँमा हुन सक्छ।
यो एक उत्तेजक विचार गर्दै, Dimethylamylamine रक्तचाप बढ्न सक्छ। यस्तो रूपमा, व्यक्तिहरूले उच्च रक्तचापबाट पीडितहरूलाई औषधि लिन वा यसको पूरक औषधि लिनबाट बच्नु पर्छ।
4. अनियमित हृदयघात (हृदय संक्रमण)
यद्यपि दुर्भाग्यवश, DMAA को उत्तेजनात्मक प्रभावले तीव्र हृदयघातको कारण हुनसक्छ र यो अवस्थाबाट पीडित व्यक्तिहरूको हृदयमा हृदय संध्यालाई खराब पार्न सक्छ। यसैले, यदि सर्जरीको लागी निर्धारित गरिएको हो भने, तपाईंलाई सञ्चालन मिति दुई हप्ता अघि DMAA लिने सल्लाहको लागि सल्लाह दिइएको छ, अन्यथा, उच्च रक्तचाप र अनियमित हृदयघातका कारण औषधिको असरले गर्दा सर्जिकल अपरेसनको साथ हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
DMAA को प्रभावहरु को जांच गर्न को लागि एक अध्ययन मा, निष्कर्षों ले संकेत दिए कि 12 स्वस्थ वयस्कों OxyELITE प्रो को दुई कैप्सूल, Dimethylamylamine सहित एक आहार पूरक, को हृदय दर को वृद्धि को रूप मा राम्रो तरिकाले र रक्तचाप को बढाया थियो।
यद्यपि, DMAA को 25 मिलीग्राम लिइएको आठ स्वस्थ वयस्कोंसँग एक दबाइ र रक्तचाप को लागी औषधी लिन पछि पनि थियो। यो संकेत मा छ कि यस औषधि मा खपत यदि ड्रग मा हृदय दर या रक्तचाप मा कुनै असर छैन।
5. ग्लूकोमाको उत्साह
उत्तेजित प्रभाव पछाडि, Dimethylamylamine पनि रक्त वाहिकाओं को घर्षण को कारण हो। दुई प्रभावहरूको संयोजन केही प्रकारका ग्लूकोमाको वृद्धि बढ्न सक्छ। यसैले, यो सल्लाह छ कि तपाईं ग्लूकोमा छ भने औषधि लिनबाट बच्न।
6. लिभर क्षति
DMAA खपतको परिणामको रूपमा लिभर हर्जको बारेमा पनि मामलाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। पाँच वर्ष पहिले, OxyELITE प्रो लिइएको 36 व्यक्ति, एक घटक को रूप मा DMAA संग एक आहार पूरक, जिगर को क्षति संग निदान गरियो। एक जना रोगी मरेपछि दुई अन्य एक लिभर प्रत्यारोपण पछि बाँच्न सफल भए।
यो उल्लेखनीय छ कि सबै 36 रोगी पूरक को सिफारिश गरिएको खुराक ले रहे हो तर उनलाई 27 पूरक को DMAA-free संस्करण ले रहे थिए। यसैले, पूरक मा विषाक्त यौगिक स्थापित गर्न सजिलो छैन।
7. मस्तिष्क ब्लेडिंग
DMAA को प्रयोग मस्तिष्क ब्लीडिंग सँग जोडिएको छ। वास्तवमा, डीएमएए प्रयोग गरिसकेपछि मानिसहरूको तीनवटा घटनाहरू दिमागमा रगत खसेको छ। यद्यपि, यो स्थापित भएको छ कि पीडितहरू नियमित रूपमा अल्कोहल वा क्याफिनसँग लागू औषधि प्रयोग गर्थे।
एक मामला मा, एक स्वस्थ व्यक्ति ले डायथ्यालाम्यालिइन सहित एक आहार पूरक को सिफारिश खुराक ले लिया, र त्यस पछि, उनले मस्तिष्क रगत को पछि एक गंभीर सिरदर्द को अनुभव शुरू गरे।
एक स्वस्थ 22 वर्षीय मान्छे को एक रिपोर्ट गरिएको मामला Jack3d को उपयोग पछि दिल को आक्रमण को विकसित गरे, DMAA युक्त एक पूरक पूरक को साथ कैफीन संग तीन सप्ताहहरु को लागी।
9. मतभेद र उल्टी
DMAA को साइड इफेक्ट्स को समीक्षा को एक अध्ययन देखि थाहा भयो कि 15% 56 मान्छे जसलाई पूरक औषधि ले लिया हो जो औषधि (OxyElite प्रो) समाहित थियो र पूरक लेने पछि उल्टी अनुभव गरे। यद्यपि, त्यहाँ कुनै प्रमाण थिएन भने यो पूरकमा DMAA हो जसले कारणले गर्दा विलक्षण र उल्टी वा अन्य सामग्रीहरू जिम्मेवार थिए।
10। अस्थायी कमजोरी
DMAA को प्रयोग संग जोडने वाला सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्ट ड्रग को लागी लगभग केहि घन्टा को लागि ऊर्जा को एक स्पष्ट हानि ('दुर्घटना') हुन्छ। यद्यपि, सबैले नराम्रो अनुभव प्रयोग गर्दछ यो साइड इफेक्ट।
DMAA को अन्य सम्भावित साइड इफेक्टहरू समावेश छन्:
घातक (यद्यपि शायदै नै)
ती DMAA को सम्भावित साइड इफेक्टहरू हुन्। यद्यपि, कुनै अध्ययनहरू छैनन् जुन विशेष गरी औषधीको साइड इफेक्टहरू विश्लेषण गर्दछ। औषधीको प्रभावको बारेमा धेरै अध्ययनहरु अलगाव मा ड्रग को बदलन को रूप मा डीएएए संग आहार को एक खुराक को रूप मा एक सामाग्री को रूप मा। त्यसो भए कि औषधिको सही खुराक स्थापना भएको छैन, समापनमा कुनै सटीकता छैन DMAA को परिणामको रूपमा साइड इफेक्टहरू। पूरकहरूमा अन्य अवयवहरूले प्रतिकूल प्रभावहरूको कारण हुन सक्छ।
यसको अतिरिक्त, केहि उदाहरणहरुमा, प्रतिकूल प्रभाव DMAA आधारित उत्पादनहरु को अति प्रयोग को परिणाम को रूप मा हो। यी साइड इफेक्टहरू अनुभव गरेका केही प्रयोगकर्ताहरूले 1,000 मिलीग्राम दैनिकमा रिपोर्ट गरेका छन्। यस्ता उदाहरणहरूमा, प्रभावकारी खुराकमा एक लक्जरी भने प्रभावबाट बच्न सकिन्छ। हामी छोटो समयमा सही DMAA खुराक बारेमा कुरा गर्नेछौं।
यसको अतिरिक्त, 1,3Dimethylamylamine केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र मा धेरै तीव्र प्रभाव को पाईन्छ यदि सीएनएस उत्तेजना संग एक साथ प्रयोग गर्छन या norenropics adrenergic प्रणाली को प्रभावित गर्दछ। यसले परिणामहरू विभिन्न साइड इफेक्ट हुन सक्छ। यसैले, यदि तपाईं प्रभावहरूबाट जोगाउन चाहानुहुन्छ भने, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ DIMA संयोजन वा उत्तेजना संग कुनै नोब्रोलिकसँग छैन।
साथै, यो सिफारिश गरिएको छ कि DMAA पूरक दैनिक आधार मा प्रयोग नहीं हुनु पर्छ। त्यसोभए, सही डेमेमेलालिलेन खुराक के हो?
ल यसरी हामी गर्छौं!
दायाँ dimethylamylamine खुट्टा अन्य परिस्थितिहरु बीच उमेर र प्रयोगकर्ता को स्वास्थ्य स्थिति जस्तै विभिन्न कारकहरु मा निर्भर छ। यद्यपि, हाल, कुनै पर्याप्त वैज्ञानिक जानकारी छैन जुन लागू औषधिको दायाँ खुट्टा स्थापित गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं मोटो / वजन घटानेको लागि DMAA उत्पादन किन्नुभएको छ भने, तपाइँले यसको लेबलमा प्रयोग निर्देशनहरू पढ्न र पछ्याउनुहोस् र तपाइँको डाक्टर, फार्मासिस्ट वा अन्य प्रतिष्ठित स्वास्थ्य विशेषज्ञले यसलाई प्रयोग गर्नु अघि सल्लाह दिनुहोस्।
सामान्यतया, DMAA को शुरुआती खुराकले 10 एमजीबाट 20mg सम्म पर्दछ। वा तपाईंको अर्काको DMAA-समावेशी उत्पादनको अर्काको सेवा। यसले तपाईंलाई मद्दत गर्न र महसुस गर्न मद्दत गर्नेछ कि तपाईंले पूर्ण खुराकमा लिनु भएको औषधीले कस्तो असर पार्छ।
यो समयले गर्दा जान्छ, तपाईले खुट्टामा 40 वा 60 मिलीग्राममा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि, खुसीको दायरालाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाणिक प्रमाण छैन।
तिनीहरू प्रतीततः dimethylamylamine को उत्पादन को लागि मानक खुराक हो। मानहरु DMAA को निर्माताहरु द्वारा वर्तमान मार्केट मा पूरक उपयोग को सिफारिशहरु को परिणाम हो।
यदि तपाइँ सर्वश्रेष्ठ परिणामहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाइँ दैनिक आधारमा DMAA उत्पादन प्रयोग गर्नुहुन्न। DMAA को खुराकहरु को बहुमत मा हरेक हप्ता दुई देखि तीन पटक खपत गर्छन। यस्तो आवृत्तिमा पूरकहरू प्रयोग गरेर, तपाइँ सजिलै संग उत्पादन मा निर्भरता को विकास गर्न देखि बचन को लागी प्रबंधन गर्दछ।
राम्रो तरिकाले, DMAA गोलहरू प्रयोग गर्दा तपाईंलाई शारीरिक व्यायाममा संलग्न गर्नु भन्दा ऊर्जा वा फोकस बढाउन वा लगभग 30 मिनेट चाहिन्छ। यसो गरिरहँदा, तपाईं केहि छोड्न सक्नुहुनेछ पूर्व कसरत पूरक साइड इफेक्ट्स.
विश्वको शीर्ष4बेस्ट बेचन मोट बर्न ड्रग्स
त्यहाँ विभिन्न तरकारीहरू तरकारी कम गर्न, शरीरको चयापचय बढ्न र / वा दायाँ भूख कायम राख्ने सहायतामा फ्याट हानि हुन्छ। फैट जलविद्युत्ले उनीहरूको ऊर्जा र फोकस बढेर एक व्यक्तिको अधिकतम व्यायाम क्षमता पनि गर्न सक्छ।
निम्न तालिकाले विश्वव्यापी चारवटा बिक्रि वसा जलिरहेको औषधि देखाउँछ।
ड्रग नाम र CAS नम्बर कसरी यो कार्य
सिफिफाइन पाउडर -CAS: 94-07-5 सिफिफेरियो पाउडर एक बिटा एन्टिनास्ट हो जुन मानव शरीरको चयापचय दर, क्यालोरी उपयोग र ऊर्जा स्तर बढाएर कार्य गर्दछ।
1,3-dimethylamylamine (DMAA पाउडर) - CAS 13803-74-2 Ephedrine को जस्तै एक रासायनिक ढाँचा संग, 1,3-dimethylamylamine एक सिंथेटिक तंत्रिका उत्तेजना को रूप मा प्रयोग गरिन्छ पोषक तत्व पूरक मा एक प्रमुख घटक को रूपमा एथलेटिक प्रदर्शन को सुधार र ऊर्जा को बढावा को लागि मदद मा।
Clenbuterol हाइड्रोक्लोराइड - CAS 21898-19-1 एक बलियो मोटो जलने शक्तिको अतिरिक्त, क्लेब्रोटरोल हाइड्रोक्लोराइड मा रक्तचाप बढाने र कडा परिश्रम गर्ने हृदयलाई बढावा दिईएको थर्मोगेनिक प्रभाव रहेको छ।
यसबाहेक, यसले ग्लूकोजनलाई ब्रेकडाउनको कारण बनाउँछ, यसैले शरीरको बोसो जलाइन्छ।
सालबुटोमोल (अल्ब्रुलोल) - सीएएस एक्सएनएक्स-एक्सएनक्स-एक्सएनएक्स salbuterol पाउडर सुरुमा अस्थमा वा मानिसहरु द्वारा प्रयोग गरिएको थियो पुरानो अवरोधक पुर्णामुखी रोग उनीहरूको सास फेर्न सक्छ। तथापि, आजकल, दबाइ को चाँडो तेजी देखि वसा हानि को बढावा दिन को लागि गरिन्छ, मांसपेशियों को रखरखाव को लागि एक वसा हानि शासन को समयमा को रूप मा राम्रो तरिकाले सहन को बढावा को लागि जब एक बोसो हानि को काम गर्दछ।
यदि तपाइँ डमाए वा माथिको मोटो जलाउने औषधीहरू मध्ये कुनै पनि खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सजिलैसँग AASraw, com बाट यति परेशान गर्न सक्नुहुनेछ।
1, 3-dimethylamylamine धेरै लाभ प्रदान गर्दछ सहित छोटो छोटो मेमोरी र रिफ्लेक्स कार्य सुधारको साथ साथै शरीर को निर्माण र शरीर को मोटा जलने मा मदद। तथापि, तपाइँलाई एक सम्मानित हेल्थकेयर प्रदायकसँग सल्लाह दिनुहोस् र अनुशंसित खुवाउने अनुगमन गर्नुहोस् सम्भावित साइड इफेक्टहरूबाट बच्न जस्तै उच्च रक्तचाप, हृदयका मुद्दाहरू र गुर्देको चोट, अन्य सम्बन्धित स्वास्थ्य जोखिमहरू बीच।
यद्यपि, सही खुराक पालन गर्नाले ग्यारेन्टी होइन कि तपाइँ प्रतिकूल प्रभावहरूको अनुभव गर्नुहुँदैन। साथै, यो उल्लेखनीय छ कि यी प्रभावहरू लाई प्रत्यक्ष रूपमा DMAA को प्रयोगमा लिङ्क कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन; त्यो अन्य पूरक सामाग्री को अनुपस्थिति मा छ।
ब्लूमर RJ1, फारेनी TM, हार्वे आईसी, Alleman आरजे - स्वस्थ पुरुषहरुमा क्याफिन र 1,3-dimethylamylamine पूरक को सुरक्षा प्रोफाइल - हाम एक्स एक्स Toxicol। 2013 नोभेम्बर, 32 (11): 1126-36। Doi: 10.1177 / 0960327113475680। एपिब 2013 फरवरी 19।
शिलिङ बीके (1), हम्मन्ड केजी, ब्लूमर आरजे, प्रेसले सीएस, याट्स सीआर। पुरुषहरु मा मौखिक 1,3-dimethylamylamine प्रशासन को भौतिक र फार्माकोकोइनटिटिनेट प्रभाव - बीएमसी फार्माकोल Toxicol। 2013 अक्टोबर 4; 14: 52। Doi: 10.1186 / 2050-6511-14-52।
"1,3-Dimethylamylamine," Examine.com, 24 अप्रिल 2014 मा प्रकाशित, अन्तिम अद्यतन मा 14 जुन 2018,
Vorce SP, et al। Dimethylamylamine: एक ईन्टिफामिन को लागि सकारात्मक इमुनाकोसी परिणाम को कारण एक ड्रग। J Anal Toxicol। (2011)
जी पी, जैक्सन एस, ईस्टन जे एक अर्को कटर गोली: DMAA पार्टी को गोलहरु बाट विषाक्तता को एक मामला। NZ मेड जे। (2010)
मर्क इंडेक्स: एक इन्साइक्लोपीडिया को रसायन, औषधि, र जीवविज्ञान (पुस्तक)।
लिसी ए, एट अल। पूरक मा मेथाइलहेक्समिन को अध्ययन र ग्यारहानी तेल। औषधि परीक्षण गुदा। (2011)
ब्लूमर आरजे, एट अल। 1,3-dimethylamylamine र क्याफिन को प्रभावहरु वा स्वस्थ पुरुष र महिलाहरु मा हृदय दर र रक्तचाप मा संयोजन मा। शारीरिक खेलकुद। (2011)
MAGL अवरोधक र FAAH अवरोधक: JW-642 र OL-135 र PF-750
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट को एक गहन सिंहावलोकन शीर्ष 10 टेस्टोस्टेरोन एस्टर: जो तपाईंको लागि सही छ?